Vaovao - Solosaina fanapahana fantsom-boasary fibre laser ho an'ny paompy afo any Korea
Masinina fanapahana laser 3D Robot
Fampiharana fitaovana metaly
milina fanapahana laser fantsona mandeha ho azy
Mifono Fibre Laser Cutting Machine
Table Single Fibre Laser Cutting Machine
Tube sy Plate Laser Cutting Machine
Linear Motor Fibre Laser Cutting Machine
Santionany fanapahana laser fantsona & fantsona
Santionany fanapahana tamin'ny laser metaly
3D Robot Laser Cutting Santionany
Laser Welding Santionany
Raharaha Tetikasa Indostria
Automatic tanteraka Fibre Laser Tube Cutting Machine Vahaolana ho amin'ny afo Pipeline In Korea
Solosaina fanapahana fantsom-boasary fibre vita amin'ny laser tanteraka ho an'ny fantsom-pitrandrahana afo any Korea
Miaraka amin'ny haingana ny fanorenana ny marani-tsaina tanàna amin'ny tany samy hafa, nentim-paharazana afo fiarovana tsy afaka hihaona ny afo fiarovana ilain'ny marani-tsaina tanàna, ary ny mahira-tsaina afo fiarovana fa tanteraka mampiasa aterineto ny zavatra teknolojia hihaona amin'ny "automatique" fepetra ny afo fisorohana sy ny fanaraha-maso efa nivoaka. Ny fanorenana ny mahay afo fiarovana Nahazo fanohanana lehibe avy amin'ny saina sy ny firenena ho any amin'ny toerana sy ny departemanta.
Fire fiarovana fanorenana dia ny olona rehetra. Fa marani-tsaina ny fanorenana ny tanàna, afo fiarovana fanorenana dia ambony loha laharana. Ahoana ny fikasana hanao rafitra fiarovana afo manan-tsaina mba hanao izany mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe mahay dia olana amin'izany tanàna izany dia tsy maintsy handinika mpitantana.
Araka ny fantatry, na ny manan-tsaina afo fiarovana orinasa na ny nentim-paharazana afo fiarovana orinasa, ny manan-danja indrindra ao amin 'ny rafitra fiarovana afo manontolo ny afo fantsona fiarovana.
Customer Requirements: Laser nanamarika sady niteti eo amin'ny fantsona.
Ny vahaolana: nanampy rafitra fanamarihana teo amin'ny loader bundle automatique mba hamenoana ny marika eo amin'ny fantsona alohan'ny hitetika.
Koa satria ny afo foana fantsona fiarovana amin'ny voasakantsakan'ny fanjakana, ny fantsona takiana dia henjana, ary ny fantsona filàna hanohitra ny fanerena, harafesiny fanoherana sy hafanana avo fanoherana. Fampiasa afo sodina fitaovana ireo: spheroidal rano bato sodina vy, varahina sodina, Stainless vy sodina, firaka sodina, slotted, nasiako totohondry sns
P2060A dia matihanina fitaovana noho ny fanapahanao fantsona. Efa nisy fotoana tapaka ary manana ambony ny automatique, izay manatsara ny famokarana fahaiza-miasa mahomby indrindra.
Ao amin'ny zavatra famonoana afo, ny tena fototra afo extinguishing toerana afo sprinkler rafitra dia tsy maintsy ahitana ireo talohan'ny-noforonina sodina, malefaka mpiray, welded fivoahan'ny Fittings sy sprinkler lohany, dia organically miaraka fanapahana, punching sy welding hanao ny asany am-boalohany.
P2060A mandeha ho azy tamin'ny laser sodina fanapahana milina dia avo-fanapahana farany tamin'ny laser fantsona fitaovana manokana. Mora ny miasa, tena mandeha ho azy, tena marina fanapahana, ary mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny indostria goavana famokarana sy ny maro hafa mandroso lafin-javatra, lasa ny safidy voalohany ho an'ny fitaovana fikarakarana Tube orinasa. Ny vokatra dia serialized hihaona isan-karazany samy hafa fanapahana sy mampidina entana avy halavan'ny sady niteti fepetra diameters sodina hafa, dia toy izany no manome asa fanompoana manokana ho mpampiasa kokoa eo amin'ny afo fiarovana an-tsaha.
Ny vy tamin'ny laser sodina cutter seranan-tsambo afaka manao fanapahana sy mpitsoka sodina rehetra ambonin'ny fanapahana amin'ny fantsona vy. Mety mivantana manapaka boribory tahaka ny fantsom-tahaka ny fantsom vy, varahina tahaka ny fantsom, aliminioma tahaka ny fantsom, Stainless vy tahaka ny fantsom indostrialy, sns .; manodidina Tube Groove fanapahana, boribory Tube slotting, boribory Tube punching, boribory Tube fanapahana lamina etc.
Golden Vtop Sodina Laser Cutter P2060A Features
Laser Golden Tube milina fanapahana dia nanjary tamin'ny taona 2012, tamin'ny Desambra 2013 ny voalohany napetraka ny milina fanapahana YAG fantsona namidy. Tamin'ny 2014, ny fantsona milina fanapahana dia niditra tao an-fitness / fitaovana fanaovana fanatanjahan-tena orinasa. Tamin'ny 2015, dia maro tamin'ny laser fibre Tube milina fanapahana dia novokarina sy ampiharina eo amin'ny orinasa isan-karazany. Ary ankehitriny isika dia foana Hanavao ny fanatsarana sy ny fantsona fanapahana milina fampisehoana.
P2060A 3000w Machine Technical masontsivana
Model isa boaloboka P2060A
Tube / Sodina karazana manodidina, kianja, mahitsizoro, boribory lavalava, Ob-karazana, D-karazana, Triangle, sns;
Tube / Sodina karazana zoro vy, fantsona vy, H-endriny vy, L-endriny vy, vy tarika, sns (fa safidy)
Tube / Sodina halavan'ny Max 6m
Tube / Sodina habe Φ20mm-200mm
Tube / Sodina Loading lanja Max 25kg / m
fehin'aina habeny Max 800mm * 800mm * 6000mm
fehin'aina lanja Max 2500 kg
Avereno toerana araka ny marina + 0,03mm
Position araka ny marina + 0,05mm
Tamin'ny laser fibre loharano 3000W
Position haingana Max 90m / min
Chuck hanodinana ny hafainganam-pandeha Max 105r / min
Cut haingana 1g
Graphic endrika Solidworks, Pro / e, ug, IGS
Electric fahefana famatsiana AC380V 60Hz 3P
Total fahefana fanjifàna 32KW
P2060A Machine Cutting santionany Fihetsiketsehana
P2060A Machine In The Korea Customer ny Factory
P2060A Machine Fa nanapaka Fire Pipeline Demo Video
Ireo mpanamboatra masinina laser manara-penitra ao Shina, izay mihaino ny sainao, manadihady ny fitakivanao vy sy ny fangatahana vy, manatsara ny fahombiazanao amin'ny famokarana. Alefaso aminay ny fanontanianao, izahay dia hanome anao vahaolana milina fanenomana laser fibra azo atao amin'ny indostrian'ny antsipirihanao.
Trano laser Golden NO.3-3 Shiqiao làlana voalohany, araben'i Houhu, Distrikan'i Jiangnan, Wuhan, Hubei, Sina
Copyright © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Zo rehetra voatokana